Hevitra MPANOHARIANA | Jiona 2011 |
2011-06-21 @ 15:55 in Politika
Nanoratsoratra ihany ny tena tamin'ny fanombohan'ity volana ity hoe ekeo izay lazainy. Efa natolotsika teo ampelantanan'ny SADC ny ho avy politikantsika Malagasy. Efa toy ny hanaiky mangingina any am-pony sy any an-tsainy tsirairay avy any ny mpanao politika avy amin'ny ankolafy sy tsy ankolafy rehetra. Heverina manko fa avy amin'izay fanekena izay rehetra mivoaka avy any no lalana mora sy haingana indrindra hivoahana amin'ny krizy sy ny tetezamita.
Samihafa tokoa anefa ny fomba fihevitr'olo-tsotra sy ny fomba fihevitra mpanao politika. Hay ry zalahy ireto mitady ny fandresena avy amin'izay lazain'ny SADC. Ny fandresena tadiaviny dia ny hahazo iray manontolo izay kendreny, ka anatin'izany ny eriteritra hanakana izay mpifaninana na mpifanandrina aminy rahatrizay tonga ny fifidianana, tsy ho afa-miditra ho amin'izany fifaninanana izany mihitsy. Endrika tahotra safidim-bahoaka sy tahotra fandrao ny mpifanandrina amin'ny tena no tian'ny olona kokoa. Koa raha mbola mikatso eo amin'izany kizo izany isika, aiza amin'izany ity fanantenana lehibe lazain'ity lohateny?
Fanantenana lehibe fa tambatambazana fatratra ny foloalindahy ankehitriny hisian'ny fitombenana ara-pitondrana, araka ny eritreritr'ireo mifehy ny fanjakana ankehitriny. Ary ny tena nivandravandra aza dia izato 9 miliara ariary nomen'ny tafika Frantsay ho an'ny tafika Malagasy hanaovana fiofanana isan-karazany, porofo fa matotra tanteraka ny fiaraha-miasa ara-tafika eo amin'ny Malagasy sy ny Frantsay. Fa inona hoy ianao no tsara kokoa, fifandraisana diplomatika sa fifandraisana ara-tafika? Fanantenana lehibe fa tsy ho fantatra sy tsy ho azo faritana mihitsy ny datim-pifidianana mety ho atao saingy hanao tokoa ve? Rehefa tsy misy datim-pifidianana voaomana dia mbola mitohy izany ny teteza-miitatra sy ny fitantanany ny firenena. Amiko manokana: eritreritra ny an'olona fa tsy ho araka ny eritreritra mihitsy ny ho fandehan-javatra. Fehiny : Toa finoana ihany koa izany iankinan'ny fanantenako izany!
Jentilisa, 21 jona 2011
2011-06-15 @ 21:58 in Ankapobeny
Tanaty finoan'olona taloha fa rehefa misy ny zava-miseho eny an-danitra dia hisy zava-mitranga ety an-tany. Zavatra natoraly ireny amiko ka tsy voatery arahina finoana ny zavatra hita etsy sy eroa. Mahazo mino izay tianao ihany ianao na izany aza.
Dia volana lasa rà ve ny tahaka izao? Mbola ho avy angamba ilay maraina vaovao no tena marina!
Les communiquÃ©s et les opinions ( premiÃ¨res impressions)
2011-06-13 @ 22:19 in Politika
Je fais juste la collection des liens et vidéo pour vous ici :
[View the story "Madagascar: communiquÃ©s & opinions" on Storify]
Ekeo izay sitrapony sy fanapaha-keviny
2011-06-08 @ 22:16 in Politika
Mialoha ny resaka dia fankasitrahana ny fanarahanareo mandrakariva ity bolongana ity no ataoko solon'arahaba. Nihevitra aho fa olona iray no nilaza ny heviny tamin'ny lahatsoratra teo aloha kanjo rehefa nojereko ny rohy niaviany dia samihafa ihany ilay izy. Ankasitrahana indrindra ny famakianareo sy ny finoanareo na handinihanareo izay voasoratra na dia maro dia maro tokoa aza ny tsy mamoaka ny heviny. Tsara ihany ny manamarika fa tsy vondron'olona ny "Maharesaka VETO" hany ka tsy haharaka ny hanoratra isan'andro loatra intsony noho ny fahasahiranana sy ny asa aman-draharaha. Manoratra ihany anefa ny tena satria toy ny ra mikoriana io, ary indraindray aza tsy mahavita zavatra hafa raha tsy manoratra kely izay hevitro sy ny tsikaritro. Hiditra amin'ny votoatin-dresaka amin'izay ary isika.
Ataoko fa samy variana isika ny amin'ny fahasahian'ny vondrona SADC mandany vola amin'ny raharahan'i Madagasikara. Tahaka izany ihany koa ny tena. Maro dia maro isika no mihevitra fa manipy vola amin'ny varavarankely ny SADC tamin'ny fivoriana heverina avy hatrany ho tsy mahomby. Betsaka isika no tsy nanantena na inona na inona loatra tamin'ny fivoriana natao tao Gaborone renivohitr'i Botswana ity. Fihetseham-po tahaka ny ahoana kosa moa no ao anatintsika rehefa nirava ilay fivoriana? Samy nisento ve fa marina ilay vinavina hoe tsy misy na inona na inona hivoaka avy ao? Inona tokoa moa no ho vita ao anatin'ny roa andro fotsiny raha ny mpanelanelana nanketo Madagasikara aza mila handany amam-bolana tsy mahavaha olana akory? Saingy izao: Inona tokoa no tena tanjon'ny SADC tamin'iny fivoriana iny? Hampanao sonia ve? sa handresy lahatra? Sa inona marina?
Isika rehetra dia vavolombelona avokoa fa misy ny milaza tsy ho any Gaborone afa-tsy hoe hanao sonia fotsiny ny fifanarahana efa vita teo aloha. Isika rehetra dia samy efa nahara-baovao fa misy ny mbola mitady ny hanohy adihevitra hisian'ny mangarahara kokoa amin'ny fifidianana ho avy izay tsy maintsy fiafaran'izao krizy iainana izao. Saingy mbola tsy fantatra aloha hoe fifidianana fahafiry vao hoeken'ny iraisam-pirenena karazan'ny lakile famaranana ny krizy iainana ankehitriny. Samy nosasana atidoha avy amin'ny hevitra sy ny tombatombana isan-karazany isika fa tsy misy mahalala kosa izay sain'ilay fikambanam-paritra tompon'ny fanasana. Ary moa ve tsy nifandresy lahatra aza isika hanaporofoana amin'izay miresaka sy mitafa amintsika fa tsy mahavaha olana ny SADC ka tokony ovaina fikambanam-paritra hafa ny mitantana indray ny fanelanelanana. Hitako tsipalotra eny ho eny hatrany manko ny fikirizana hampidirana ny OIF (mpiteny Frantsay) na ny COI (Oseana Indiana) ho mpanelanelana; raha ireo fikambanana ireo tokoa no nanelanelana dia efa ela no "nivaha ny krizy" ary efa nitondra niadana sy eken'ny Iraisampirenena ny nandromba-pahefana ankehitriny.
Sarotra dia sarotra ny tranga eto Madagasikara satria tsy afa-mahavaha olana intsony isika samy Malagasy satria efa niasa ny fitaovam-piadiana nanonganam-panjakana ka tsy mpitsara tsy mitanila intsony ny Tafika noheverina ho tsindriletam- pahefana manda faran'ny Repoblika (sy atahoran'ny mpanao politika tsy hihoam-pefy). Na hiantso fifampidinihana samy Malagasy impiry eto aza isika ka tsy misy ny raiamandreny toavina sy ekenteny ary tsy vonona ny tsy hitongilana befahatany ny tafika amin'ny fanapahan-kevitra famahana olana dia hihodikodina fotsiny isika nefa dia tsy hisy fandrosoana na dia kely aza. Napetraka amin'ny vahiny ny fanelanelanana satria, voalohany izay no fombafomban'ny famahana olana amin'izao fotoana izao, tahaka ny hitantsika any Honduras. Faharoa, ireo no heverina ho tsy mitongilana befahantany sady mihaino tsy mahalala tsara ny zavamisy fa mandray kosa ny tatitra avy amin'ireo ankolafy tsirairay ka avy amin'ny tatitra no ahafahany manao tsoa-kevitra. Mazava loatra fa miankina tanteraka amin'ny fahaizana mitatitra sy mandresy lahatra ny fifampiresahina amin'ny mpanelanelana tsy voatery hahalala ny antsipirian'ny zavamisy eto Madagasikara. Koa aza atao mahagaga raha misy ireo ankolafy hodidinina manampahaizana manokana momba ny serasera sy ny lalàna.
Ankehitriny isika miandry ny fanapahan-kevitra avy amin'ny vahiny. Toy ny tsy manana fiandrianam-pirenena intsony fa izay sitrapony dia tokony hotanterahina. Safidintsika io na dia tsinahy aza ka tokony ekena hatrany na inona valiny na inona. Na mifanaraka amin'ny fanantenantsika na heverina ho manosihosy ny fironana misy antsika sy heverina ho tsy rariny aza dia tsara samy milaza mialoha ny hanaiky ny fanapahan-kevitra mivoaka avy any isika. Raha hoy ny filazana hoe mitondra Rajoelina ary tsy mody Ravalomanana dia atao ny fifidianana dia aleo ho izay fa tsy mila adihevitra intsony. Raha hoy ny fanambarana hoe miala Rajoelina ary mody Ravalomanana dia tokony ekena ihany koa satria izay no fanapahan-kevitra farany. Raha hoy ny filazana hoe mitondra Rajoelina dia mody Ravalomanana dia samy hanofahofa sainam-pirenena avokoa amin'ny fetim-pirenena ho avy. Raha toa indray mivoaka ny hoe miala Rajoelina dia tsy mody Ravalomanana dia tsy maninona fa izay no heverin'ny SADC fa tsy mandratra indrindra ny vahoaka Malagasy izay hisy ratra ihany. Koa izaho manokana dia ekeko avokoa izay valiny avy any na ho vy na ho vato na ho vary fa enga anie ho hain'ny SADC ny mampihatra izay fehikeviny ary hisy tokoa izany fehikevitra izany. Raha manankambara amin'izay fehikevitra mivoaka ny vahoaka izany hoe ny vondron'olona maro sahy mihetsika sy mahasahy mihantsy ny mpitandro ny filaminana dia resaka hafa izany saingy tsy mino loatra ny hisian'izany ny tenako. Hevitra ny ahy izay, mety ho be ny tsy mahazaka saingy izay no fitandroako ny fahalalahako miteny an-tserasera. Tsy manery anareo ihany koa aho hitovy hevitra amiko.
Jentilisa, 9 jona 2011 amin'ny 00:15 maraina.